Pallet Handling - Delta Injineer Belgium
Kariifka "Pallet Handling"
Thursday, March 13 2014 by Injineer Delta
Nuqulkani wuxuu u oggolaanayaa hal hawlwadeen inuu sameeyo baaldi dhererkiisu dhan yahay (3100 mm), adoo xiraya laba baloog oo dhaadheer oo dherar ah. Yaraynta kharashka gaadiidka 5 illaa 15%!
Published in Gacan-siinta Pallet
Qalabka fidiyaha Pallet
Buug-yarahaani wuxuu faafiyaa faaruqyo madhan oo lagu ridayo qalabka wax lagu rito. Yaraynta waqtiga dhexgalka wadaha iyo ka fogaanshaha gawaarida boobayaasha ee wax soo saarka.
Lagu dhexgali karaa mashiinnada wax lagu soo qaado ee Delta si loo helo khad buuxa oo toos ah.
Gawaarida xawaaladda lagu ridayo ayaa masaafada dheer la xareeyaa iyada oo aan loo diideyn marin u helitaanka mashiinnada kale. Waxay ka soo qaaddaa xirmooyinka sahamiyaasha waxayna u keentaa weelka wax lagu qaado.
Gaadhiga Pallet wareejinta
Conveyors-ka loo yaqaan 'Pallet conveyors' waxaa laga heli karaa xajmiyo kaladuwan: 1240 mm iyo 1560 mm. Waxay isu keentaa meelkasta oo loo yaqaan 'DAWAN'
Tag: Joojinta khadka, gilgishay, sariirtaada
Kor u qaadista 'Pallet'
Wiishkan yar yar wuxuu ka adkaanayaa farqiga udhaxeeya dabaqa & mashiinka. Waxay ku quudisaa baallooyinka gudaha ama dibedda ama dusha gawaarida gawaarida, iyadoo kor u qaadaysa boodhadhka heer sare (mashiin) ama ku dhigaya dhulka.